Hlanganisa i-Voucher, Coupon, ne-Discount Code Solutions | Martech Zone
ULwesihlanu, July 15, 2016 NgoMsombuluko, Julayi 18, 2016 Douglas Karr
Amakhodi esaphulelo ayizindlela ezilungile zokuheha isivakashi sakho ukuthi sivale. Noma ngabe isaphulelo senqwaba noma ukuthunyelwa kwamahhala nje, isaphulelo singenza umehluko. Esikhathini esedlule, besizakhela thina sisebenzisa amafonti webhakhodi bese siwalandelela ekhelini le-imeyili. Kwakungemnandi… ikakhulukazi uma ungeze ubunzima bokuhlengwa okuningi, ukwabelana ngamakhodi, njll. Ngaphezu kwalokho, amafonti asebenze kahle ku-inthanethi, kepha bekufanele sakhe isithombe sawo ngamandla kwi-imeyili.
Amakhodi amavawusha, isaphulelo namakhuphoni avame ukuhlukunyezwa, ngakho-ke inkundla yokuwalandela ibalulekile. Izinhlelo ezimbili zisanda kuxoxwa kuhlelo lwe- isithangami se-imeyili Ngingowalokhu:
iVoucher - Ipulatifomu Yokumaketha Yevawusha
iVoucher ikuvumela ukuthi uphathe ngokugcwele futhi usebenzise yonke i-voucher yakho, isigqebhezana namakhodi esaphulelo kusuka kungxenyekazi eyodwa, ebanjelwe.
Dala izaphulelo - Yakha izaphulelo ezikhangayo ezilungiselelwe ngokuzenzakalela nge-imeyili, iwebhu, ezenhlalo nezamaselula zisebenzisa i-interface yazo yomsebenzisi.
Shicilela izaphulelo - Shicilela izaphulelo kuziteshi eziningi ngasikhathi sinye ukuze uzuze ukufinyelela okuphezulu.
Thwebula idatha - Idatha efakwe emakhasini okufika anegama ikuvumela ukuthi uphathe kalula ubudlelwane bamakhasimende ngaphakathi kwepulatifomu.
Sebenzisa izaphulelo - Sebenzisa izaphulelo ngokuphepha ngesikhathi sangempela, ku-inthanethi nasesitolo.
Ukubika - Ukusebenza okuphelele kokubika kusho ukuthi ungathatha futhi uphathe konke ukuxhumana kwamakhasimende namavawusha akho.
I-Voucherify - I-API Yokumaketha Ivawusha
Kulabo kini abangafuna ukuthuthukisa isisombululo esinamandla futhi basihlanganise ngaphakathi, Qinisekisa inikeza ngamandla API ukufaka, ukulandelela, nokusebenzisa amakhodi amakhuphoni kunoma yimuphi umthombo.
Nge-REST API yabo, amakhodi angahlanganiswa kumawebhusayithi (i-client-side JS SDK, i-voucherify widget checkout), izinhlelo zokusebenza zeselula (i-Android ne-iOS SDKs), noma i-back-end (PHP, Ruby, Node.js, Java SDKs, Node .js) yesikhulumi sakho. Ama-SDK amaRobust ayatholakala.
Chofoza ukuze ubonise bukhoma:
Thola Isivivinyo Sezinyanga Ezi-3 ZAMAHHALA se-Voucherify!
Tags: Apiisigqebhezana apiamakhodi wesigqebhezanaukuhlengwa kwekhuphoniamakhodi esaphuleloamakhodi amakhuphoni e-mailchimpamakhodi wesaphulelo se-mailchimpUkuhlengwaukuhlengwa kwevawushauhlelo lwamavawushaqinisekisa
Jul 18, 2016 ku-4: 16 AM
Sawubona Douglas, ngiyabonga ngokusifaka kuhlu. Abafundi beMarketTech Blog bangathola ikhodi yokuphromotha eyingqayizivele yokubhaliselwa kwamahhala kweVoucherify yezinyanga ezi-3 lapha http://redeem.voucherify.io/marketingtech